Ndi UBO-ndebanye aha ... | Law & More B.V.
blog » UBO-ndebanye aha: egwu nke UBO obula?
UBO-ndebanye aha: egwu nke UBO obula?
Na Mee 20, 2015 Ndị omebe iwu Europe nakweere iwu nke anọ nke ịchụ ego n'ego. Na ntinye akwụkwọ Ntụziaka a, ndị omebe iwu steeti ọ bụla kwesiri igosipụta aha ndị UBO. Ekwesịrị itinye UBO nke ụlọ ọrụ niile na aha. Dika UBO ga-erite mmadu okike nke na-ejigide ihe kariri 25% nke ihe banyere ulo oru, obughi ibu ndi edeputara na ahia. N'ihe banyere imebi UBO (s), ihe ikpeazu ikpeazu nwere ike ibughari onye mmadu sitere na ulo oru ndi kachasi elu nke ulo oru ibu onye UBO. Na Netherlands, a ga-etinye ihe ndekọ UBO tupu June 26, 2017. Ihe a na-atụ anya ya bụ na ndebanye aha ahụ ga-eweta ọtụtụ nsonazụ maka ihu igwe azụmaahịa Dutch na European. Mgbe mmadu n’achoghi iju ya anya, ihe doro anya maka mgbanwe ndi n’abia ga adi nkpa. Ya mere, ederede a ga - anwa ime ka echiche nke UBO aha dị na ya pụta site na nyochaa njirimara ya na ihe ọ pụtara.
2. Echiche ndi Europe
Iwu nke Anọ Na-emegide Moneykwụsị Ego bụ ngwaahịa ndị emepụtara na Europe. Echiche dị na ntinye akwụkwọ Ntụziaka a bụ na Europe chọrọ igbochi ndị na-ebuputa ego na ndị na-enweta ego na-eyi ọha egwu ịghara iji mmegharị nke isi obodo ugbu a na nnwere onwe ịnye ọrụ ego maka nzube mpụ ha. N'ikwekọ na nke a bụ ọchịchọ iji gosipụta ụdị ndị UBO niile, ebe ha bụ ndị nwere ikike dị ukwuu. Ndebanye aha UBO na-etolite naanị akụkụ nke mgbanwe ndị nke anọ nke Iwu Ego Ego na-eweta iji mezuo ebumnuche ya.
Dịka anyị kwuru, ekwesịrị itinye iwu ahụ tupu June 26, 2017. N'okwu nke aha UBO, Ntụziaka depụtara usoro doro anya. Ntuziaka ahụ nyere ndị otu nọ n'obodo ahụ iweta ọtụtụ ụlọ ọrụ iwu dị ka o kwere mee n'ime oke nke iwu ahụ. Dịka ntuziaka ahụ si dị, ụdị ndị ọchịchị atọ ga-enwerịrị ike ịnweta data UBO n'ọnọdụ ọ bụla: ndị ikike tozuru etozu (gụnyere ndị isi na-ahụ maka njikwa ego) na ngalaba ọgụgụ isi ego niile, ndị ọrụ nwere ikike (gụnyere ụlọ ọrụ ego, ụlọ ọrụ kredit, ndị na-enyocha, notaries, ndị na-ere ahịa. na ndị na-enye ọrụ ịgba chaa chaa) yana mmadụ niile ma ọ bụ ndị otu nwere ike igosipụta mmasị ziri ezi. Ndị otu ndị otu ahụ, nweere onwe ha ịhọrọ idebanye aha ọha nke ọma. A kọwaghị okwu ahụ "ndị ikike ruru eru" na Ntụziaka ahụ. Maka nke a, European Commission rịọrọ ka edozigharị ya na ndozigharị ọchọrọ maka ntinye akwụkwọ nke July 5, 2016.
Obere ihe omuma nke aghaghi itinye na ndebanye aha bu ihe a: aha zuru oke, onwa amuru, afo amuru, obodo, obodo ibi na udiri aku na uba ndi UBO nwere. Ọzọkwa, nkọwa nke “UBO” dị obosara. Ọ bụghị nanị na okwu a na-agụnye njikwa aka (na ndabere nke ndị nwe ya) nke 25% ma ọ bụ karịa, mana ọ ga-ekwe omume ịchịkwa karịa 25%. Njikwa na-ezighi ezi pụtara njikwa n'ụzọ ọ bụla karịa site na ịnweta. Njikwa a nwere ike ịdabere na njikwa njikwa na nkwekọrịta ndị nwe oke, ikike inwe mmetụta dị ukwuu na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ikike ịhọpụta ndị isi.
3. Ndebanye aha na Netherlands
Edere ụkpụrụ Dutch maka mmejuputa iwu dị na ihe ndekọ UBO bụ nke ukwuu n'akwụkwọ ozi o zigaara minista Dijsselbloem nke ụbọchị nke iri nke ọnwa iri na abalị 10. N'ihe banyere ihe ndị achọrọ idebanye aha ha n'akwụkwọ ozi, akwụkwọ ozi ahụ na-egosi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ụdị Dutch dị adị ụlọ ọrụ ga-anọgide na-emetụ emetụ, belụsọ naanị ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọha na eze. Agaghị ewepụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ edepụtara. N'adịghị ka usoro atọ nke ndị mmadụ na ndị ọchịchị nwere ikike inyocha ozi dị na aha ahụ dị ka ahọpụtara n'ogo European, Netherlands ga-ahọrọ aha ọha. Nke a bụ n'ihi na ndebanye aha amachi edekọtara ọghọm n'ihe dị ka ọnụ ahịa, ọ ga-ekwe omume na njiri mara. Dika ndekọ a ga-abụ nke ọha, a ga-arụ ọrụ nchekwa anọ na:
3.1. A ga-edenye onye ọrụ ọ bụla nke ozi ahụ.
3.2. Enweghị ikike ịnweta ozi n'efu.
3.3. Ndị ọrụ na-abụghị ndị ọchịchị a họpụtara ahọpụtara (ndị ọchịchị nke gụnyere ndị ọzọ Bank Dutch, Financiallọ Ọrụ Ego Ego na Superlọ Ọrụ Njikwa Ego) na Dutch Security Intelligence Unit ga-enweta ohere ịche oke data.
3.4. N'ihe banyere ihe egwu nke ịtọrọ mmadụ, mpụ, ihe ike ma ọ bụ iyi egwu, a ga-eleba anya n'ihe ga-enyere ndị nwere ọghọm ụfọdụ data aka ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ndị ọrụ na-abụghị ndị nwe obodo akpọrọ kpọmkwem na AFM nwere ike nweta ozi ndị a: aha, ọnwa ọmụmụ, mba, obodo obibi na ọdịdị na oke nke mmasị akụ na ụba nke onye nwe uru nwere. Nke a kacha nta pụtara na ọ bụghị ụlọ ọrụ niile kwesiri ime nyocha UBO na-eme ihe niile nwere ike ịnweta ozi niile ha chọrọ site na ndekọ. Ha kwesiri ichikota ozi a n’onwe ha ma chekwaa ihe omuma a na nhazi ha.
N'iburu n'uche na ndị ọchịchị a họpụtara ahọpụta na FIU nwere ụfọdụ ọrụ nyocha na nlegide anya, ha ga-enwetakwu data: (1) ụbọchị, ebe ha mụrụ, (2) adresị, (3) ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ obodo na / ma ọ bụ akara njirimara ụtụ si mba ọzọ (TIN), (4) ọdịdị, ọnụọgụ na ụbọchị na ebe edepụtara akwụkwọ nke ejiri nyochaa ma ọ bụ nwee akwụkwọ ahụ na (5) akwụkwọ nke na-egosi ihe mere mmadụ ji nwee ọnọdụ ahụ. nke UBO na ogo nke kwekọrọ (akụ na ụba) mmasị.
Ihe ịtụ anya bụ na berlọ Ọrụ Azụmahịa ga-ahazi aha ahụ. Ihe omuma a gha abata n’enye aha site n’enyefe ihe omuma nke ndi ulo oru na ndi iwu n’onwe ha. Ndị UBO agaghị ajụ isonye na ntinye ozi a. Ọzọkwa, ndị ọchịchị nwere ikike ga-arụkwa ọrụ mmanye: ha nwere ọrụ ịgwa ndị ahụ ihe ndekọ aha ha niile, nke dị iche na ihe ndekọ ahụ. Ndi enyere ikike n’aka ọrụ nke ijikọ iribiga ego, inye ndị na-eyi ọha egwu na ụdị mpụ ego na akụnụba ndị ọzọ, dabere n ’ọrụ ha, kwesiri ma ọ bụ chọọ ka ha nyefee data nke dị iche na ndebanye aha ahụ. Anabatabeghị onye ga-arụ ọrụ maka mmebe ahụ na ntinye aka na nke ziri ezi na ntinye data UBO yana onye ga - enwe ike inye ego ntaramahụhụ.
4. Usoro nke enweghị ntụpọ?
N'agbanyeghị oke iwu siri ike, iwu UBO adịghị ka mmiri anaghị egbochi n'akụkụ niile. E nwere ọtụtụ ụzọ mmadụ nwere ike isi hụ na mmadụ dara n’adabereghị n’ ndekọ ndekọ UBO.
4.1. Onye tụkwasịrị obi
Otu nwere ike ịhọrọ ịrụ ọrụ site na njikwa ntụkwasị obi. Onu ogugu ndi mmadu tukwasiri obi n'okpuru iwu di iche. Ntụziaka ahụ debanye aha maka ndị tụkwasịrị obi. Ndebanye aha a akọwapụtara, agbanyeghị, ọ gaghị anabata ọha. N'ụzọ dị otu a, anabataghị ịhapụ onye tụkwasịrị ntụkwasị obi ruo n'ókè ụfọdụ. Ihe atụ nke ndị tụkwasịrị obi bụ ntụkwasị obi Anglo-American na ntụkwasị obi Curaçao. Bonaire makwaara onu ogugu na ntukwasi obi: ndi DPF. Nke a bụ otu ụdị ntọala, nke, n'adịghị ka ntụkwasị obi ahụ, nwere njirimara iwu. Iwu BES na-achịkwa ya.
4.2. Nyefee oche
Ntuziaka Ntuba Ego nke Anọ na-ekwu banyere ihe ndị a gbasara itinye n'ọrụ ya: "… ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ iwu ndị ọzọ guzobere n'ókèala ha". Ahịrị a na-egosi na ụlọ ọrụ, nke guzobere na mpụga ókèala mba ndị otu, ma mechaa kwaga oche ụlọ ọrụ ha na mpaghara otu, iwu ahụ anaghị ekpuchi ya. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike iche echiche nke iwu iwu ama ama dịka Jersey Ltd., BES BV na American Inc. Otu DPF nwekwara ike kpebie ịkwaga ebe ọ nọ na Netherlands ma gaa n'ihu na-achụso ihe omume dịka DPF.
Ajụjụ a bụ ma European Union ga-achọ ịkọwapụta ohere dị na mbụ ịhapụ ịhapụ iwu UBO. Agbanyeghị, enwere ugbua enweghị ihe ngosipụta doro anya na mgbanwe ga-ewere isi ihe a n'oge dị mkpirikpi. N'ime atụmatụ ya edepụtara na July 5, European Commission rịọrọ mgbanwe ole na ole na Ntụziaka ahụ. Ndokwa a agwaghị mgbanwe gbasara ihe ndị ae kwuru n’elu. Ọzọkwa, o dobeghị anya ma aga-eme ihe mgbanwe ndị ahụ akwadoro. Na agbanyeghị, ọ gaghị abụ ihe ọjọọ iburu n'uche mgbanwe ndị atụpụtara na o nwere ike ịme ka mgbanwe ndị ọzọ mee emesịa. Uzo mgbanwe mbu ahu dika atuputara ugbua bu ndi a:
5.1. Kọmịshọn ahụ tụrụ aro ka eme ka ndekọ ahụ bụrụ ihe ọhaneze. Nke a pụtara na a ga-agbanwezi iwu ahụ mgbe ọ bụla ndị mmadụ na ndị otu nwere ike igosipụta ezigbo iwu. Ebe enwere ike ibute data ha dị na mbụ ekwusara, a ga-ekpughere ha ndekọ ndekọ ahụ nke ọma.
5.2. Kọmịshịdọ a kwupụtara kọwaa okwu a "ndị ikike tozuru oke" dịka ndị a: ".. ndị gọọmentị obodo ndị ahụ nwere ọrụ maka ịhazi ịkwa ego ma ọ bụ itinye ndị na-eyi ọha egwu ego, gụnyere ndị isi ụtụ isi na ndị nwe obodo nwere ọrụ nyocha ma ọ bụ ịgba akwụkwọ mkpesa ego, ndị metụtara mmekpa ahụ. na mmefu ego nke ndị na-eyi ọha egwu, ịchụ ma na-ejide ma ọ bụ na-ejide ma napụ ya na akụ ndị omempụ ”
5.3. Kọmịshọn ahụ rịọ ka achọ nnweta nghọta ka ukwuu na ohere dị mma nke njirimara nke UBO site na njikọta nke ndekọ obodo niile nke ndị otu ndị otu.
5.4. Kọmịshọn ahụ kwukwara na, n'ụfọdụ, belata ọnụego UBO nke 25% rue 10%. Nka gabu ihe diri ndi oru iwu gabu ihe ejighi ego. Ndị a bụ ".. Ngalaba etiti na-enweghị ọrụ akụ na ụba ọ bụla ma ọ bụ naanị na-eme ka ndị nwe ya bara uru pụọ na akụ".
5.5. Kọmịshọn ahụ tụrụ aro ka ịgbanwee oge a ga-eji mejuputa ya site na June 26, 2017 rue Jenụwarị 1, 2017.
Iwebata aha ndi UBO oha na eze nwere ezi ihe ga enyere ha aka n ’ulo oru ndi no n’otu a. Ndị mmadụ nwere ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ nwere karịa na 25% nke (ụlọ ọrụ) mmasị nke ụlọ ọrụ na-abụghị ụlọ ọrụ edepụtara, ga-amanye ịchụ ọtụtụ ihe na nzuzo, na-abawanye ihe egwu nke imechu mmadụ na idina mmadụ; n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Netherlands egosiwo na ọ ga-eme ike ya niile iji belata ihe egwu ndị a dị ka o kwere mee. Na mgbakwunye, ụfọdụ oge ga-enweta oke ọrụ gbasara nlele na ịnyefe data dị iche na data dị na aha UBO. Ntinye akwụkwọ nke UBO nwere ike ịpụta na mmadụ ga-atụgharị gaa na ọnụ ọgụgụ ntụkwasị obi, ma ọ bụ ụlọ ọrụ iwu guzobere na mpụga ndị otu nke ga - enyefe ezi oche ya na steeti otu. Ọ maghị ma ụlọ ndị a hà ga-adịgide na nhọrọ ga-eme n'ọdịnihu. Ndozigharị usoro nke anọ nke ego ana - enye ego, enweghị mgbanwe ọ bụla na ebe a. Na Netherlands, ihe mmadụ ga-eburu n'uche bụ maka ịgbanye akwụkwọ ndekọ mba, mgbanwe ga - ekwe omume na ntinye 25% na ụbọchị mmemme izizi.
Next Post Na ịgba akwụkwọ mmadụ nwere ike ịtụ anya ọtụtụ esemokwu…